သက်တန့်ချို: ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင် (တဂ် ပို့စ် )
ကိုဇော် February 29, 2012 at 11:14 AM
ငါးထောင်တန် ကဒ်ကို ထောက်ခံပါတယ်။
ဒီ့ထက် ဈေးများတာကို ရှုတ်ချပါတယ်။
ငါးထောင်ထက် ပိုဈေးနည်းမယ် ဆိုရင် ပိုပြီး ကြိုဆိုပါတယ်။
Mr Khin February 29, 2012 at 12:13 PM
သင့်ရဲ့ ဘလော့ပေါ် က မေးခွန်းတွေ အားလုံးကို ရက်စ်တူအောလ် လို့ပဲဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ကို သုံးကြရမှာ.. ဒါမှတော်ခါကျမယ်။ ခင်ဗျားလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ တန်ဖိုးနည်းဖုန်းဆိုတာမရှိပါ။ ကျနော်ပြောတာ SIM ကာဒ်ကိုပြောတာ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဈေး ကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီ ကဝယ်လို့ရတယ်။ ခုဗမာပြည်မှာက SIM ကာဒ်ဖြန့်ချိမှု ကို အစိုးရက အသေဆုတ်ကိုင်ထားတာလေ။အခု ဆိုယင် နှစ်သိန်းခန့်နဲ့ ဖြန့်မယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီ 23 ခုမှာလည်း သူခိုးသေလို့ မငိုဝံ့ ဆိုတာလိုဖြစ်နေတယ်တယ်လေ။ ထိတ်တန်းအာဏာပိုင်တွေ ကို တန်စိုး လက်ဆောင်တွေပေးပြီး ပြည်သူတွေဆီက မတန်တဆဈေးနှုန်း နဲ့ တင်ပြီးရိုက်ဖို့ ကြံထားတာလေ။ အခုဆိုသူတို့ တသိန်းရှစ်သောင်းထက် ပိုလျှော့လို့ မရဖြစ်နေကြတယ်။ ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ငွေအားပိုတောင့်ပြီး မြန်မြန်လေးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ယင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ တခုလုပ်ပစ်ဖိုနေပြီလေ။ ဒါလည်း ရိုက်စားကုမ္ပဏီ ဖြစ်မလာအောင်လို့ စာရင်းစစ်အဖွဲ့ ကောင်းကောင်းနဲ့transperant ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။
မဒမ်ကိုး February 29, 2012 at 1:08 PM
အယောက် ၅၀ ကျော်တဂ်ပေးမယ်စိတ်ချ. လုံးဝကိုထောက်ခံတယ်
Z@! February 29, 2012 at 2:48 PM
ဒီအကြောင်းကို ပြောချင်လွန်းလို့ပါဗျာ..မတဂ် လဲရေးမလို့ လုပ်နေတာပါ။ အဟီး.. ရုံးမှာက UPLOADING ကို ပိတ်ထားလို့ ဘလော့တွေ တင်မရဖြစ်နေတာ.
စပယ်ရှယ်ကို ရေးပေးမယ် စိတ်သာချ ကိုသက်တန့်ရေ
အလင်းသစ် February 29, 2012 at 3:10 PM
ဖြစ်စေချင်တယ်အကိုရေ။။ ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခု ၅၀၀၀ ဆိုတာ နိုင်ငံတကာနှုန်းနဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။။ လက်မတစ်ပြားစာလောက်လေးကို ၁၅သိန်း၊ သိန်း ၂၀ ဆိုတော့ ဟိုးအရင်တုန်းက ဆင်းမ်ကဒ်ဆိုတာကို အထူးအဆန်းတွေဖြစ်လို့။။ အခုကျ Handset သာရှိရင် လမ်းမှာဝေနေတဲ့ ကဒ်တစ်ခုယူထည့်လိုက်ပြီး ပိုက်ဆံသွင်းပြီးဆက်ရင် ရနေတာတွေ့တော့ ဆင်းမ်ကဒ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်တော့သလိုပဲ..:P။။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) February 29, 2012 at 6:12 PM
အမှတ်တရ တက်ဂ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ...း)
မိုးယံ February 29, 2012 at 6:48 PM
ရင်တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ဖတ်လာတာ..အောက်ဆုံးက နံမည်ကိုမြင်တော့ သရဲတစ္ဆေတစ်ကောင်မြင်လိုက်ရသလိုပဲ... ဟဲဟဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါလေရာ ငါးပိချက်ဆိုတော့ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်စွ ဆိုသလို ဟိုမှာ ကော်ပီ ဒီမှာကော်ပီလုပ်ပြီး ကိုယ့်စာမျက်နှာမှာ paste လုပ်ရဦးမှာပေါ့.... ဟီဟိ..။ ကျေးဇူး ဦးသက်တန့်
SHWE ZIN U February 29, 2012 at 6:49 PM
ပိုစ့်လေး ကိုရေးပါမယ် စိတ်ချ
mr.high flyer February 29, 2012 at 7:01 PM
SHWE ZIN U February 29, 2012 at 7:03 PM
ဒီမှာလည်း မန့်ထားမရှိတော့ဘူး ကိုသက်တန့်ရေ
ပို့စ်လေး ရေးမယ်နော် စိတ်ချ အလကားကို လိုချင်နေတာ
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) February 29, 2012 at 7:32 PM
Z@! February 29, 2012 at 8:30 PM
ကိုင်း ချက်ချင်းပဲ ရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ..
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 29, 2012 at 11:56 PM
ဖြစ်စေချင်တယ် ဆိုတာထက်ကို ပိုပါတယ်အကိုရေ... ရေးဖြစ်အောင်ရေးမယ်အကို...တင်္ဂပေးလို့ ကျေးဇူးပါလို့..
peter kyaw March 1, 2012 at 12:45 AM
နိုင်းနိုင်းစနေ March 1, 2012 at 2:10 AM
မြန်မာပြည်က ဟန်းဖုန်းအကြောင်း မသိနားမလည်သူကို လာရေးခိုင်းတော့.. ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားလိုက်အုန်းမယ် :P
နိုင်းနိုင်းစနေ March 1, 2012 at 2:11 AM
မြန်မာပြည်က ဟန်းဖုန်းအကြောင်း မသိနားမလည်သူတစ်ယောက်ကို လာရေးခိုင်းတော့.... နားမလည်သလိုပဲ ရေးလိုက်တော့မယ်း)
ချစ်စံအိမ် March 1, 2012 at 5:19 AM
mstint March 1, 2012 at 8:40 AM
မောင်သက်တန့်ရေ... တဂ်ပို့စ်လေးဆိုပေမယ့် အများအတွက်အကျိုးရှိပြီး အားပေးထောက်ခံသင့်တဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်မို့ ကြည်နူးစွာရေးမှာပါကွယ်။
8Yar March 1, 2012 at 9:08 AM
အစ်မနိုင်နိုင်းဆီမှာ အခုပဲ Tag Post လေးကိုဖတ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပါ။ ကြိုးစားမှုတိုင်းမှာ အောင်မြင်ခြင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြသွေးနီ March 1, 2012 at 2:21 PM
အများဆန္ဒကို လှစ်လျူမရှုပဲ လူကြီးမင်းတို့ စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပြီလို့ ထင်မိကြောင်းပါ။
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫: March 1, 2012 at 6:40 PM
ကိုအလင်းသစ်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် တဂ်ပို့လေးရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ..။
ကိုတုတ်ကြီး March 1, 2012 at 10:26 PM
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းကိုသာ လဲလေိုက်ကြပါ
ဘယ်သူမှလဲ လက်ညောင်းအောင် ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူး...
အာညောင်းအောင်လဲ ရှင်းလင်းပွဲ မလုပ်ရတော့ပါဘူး
အဖြူရောင်နတ်သမီး March 5, 2012 at 8:00 AM
(ဖြေ)၁။လွန်ခဲ့တဲ့(၅)နှစ်က အမှန်တစ်ကယ်ကို ၂၅သိန်းပေးပြီး ဝယ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် (၁၀)သိန်းတန်ဖုန်း၊ (၅)သိန်းတန်ဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကယ့်ကို အံ့သြခဲ့ရပါတယ်၊ငွေကြေးပမာဏ အဆပေါင်းများစွာ ကွာခြားသွားတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့
ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်၊ Quaility ပိုင်းကတော့ ဖုန်းနှစ်လုံးကို ယှဉ်ပြီး မသုံးကြည့်ရသေးတဲ့အတွက် မဝေဖန်ပါ။
(ဖြေ)၂။မြန်မာပြည်နှင့် တခြားသော ဆင်းရဲနိုင်ငံများမှာ ဟန်းဖုန်းကို လူတိုင်း မကိုင်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူး၊ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံများ၊ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံများမှာတော့ ဟန်းဖုန်းကို အသက်(၇)နှစ်အရွယ်ကလေးများက အစ ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲနေကြပါပြီ
“မြန်မာပြည်မှာ ဟန်းဖုန်းကို လူတန်းစားတစ်ရပ်သာလျှင် ကိုင်ဆောင်နိုင်ရမည်”ဆိုတဲ့ အာဏာရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စက
ားကို အခုထိ ကျမ မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ။
ရေး..ပိုင်းတွေမှာ အရမ်းကိုအရေးပါတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
(မေး)၃ ။ငါးထောင်တန်ဖုန်းပေါ်လာစေဖို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးလွှတ်တော
်ကိုတင်ပြခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ ။
၅ ။ ငါးထောင်တန် ဖုန်းအပေါ် သင့်အမြင်လေး တစ်ပိုဒ်လောက်ချရေးပေးပါ ။ ၅။ဟန်းဖုန်းတစ်လုံးကို ငွေအနည်းငယ်မျှဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အထက်မှာ ကျမပြောခဲ့သလို ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းမှာ အများကြီးအထောက်အကူပြုလာမှာ
(၅)သိန်းတန်ဖုန်းတောင်ထွက်နေပြီပဲ..၊ အလားအလာ အများကြီးရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ မည်သည့်ကိစ္စမဆို တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ထောက်ခံမဲတစ်မဲ အသင့်ကိုင်ဆောင်ထားပါကြောင်း အသိပေးရင်း (၅၀၀၀)တန်ဖုန်းများ ထွက်ရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်သူများ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ...။
mu mu January 28, 2013 at 10:30 AM
တန်းဖိုးနည်းဖုန်းလို့အရှက်မရှိကြေညာ နေကြတဲ့ MPT ၀န်ကြီးနှင့်တကွသော ငါးဆယ်သော မတရား လာဘ်စားတဲ့ အပေါင်း ငါးဆယ်ဟာဆိုလို့ရင် အခုရောင်းရင်းတို့သိကြမြင်ကြ တဲ့အတိုင်းပါဘဲ ဇာတ်လိုက်နဲ့ လူကြမ်း လို့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဆုံးမှာ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်